Aluminom Alloy Furnace Ndị na-emepụta & Ndị na-ebunye ihe - China Aluminom Alloy Furnace Factory
Igwe ọkụ na-agbaze GTM Aluminom Alloy
GTM Aluminom Alloy Concentrating Melting Furnace, nke a na-akpọkwa dị ka Tower Furnace, na-anabata ihe nrụpụta ụlọ elu, nke nwere obere ume ike, ikike ịgbaze siri ike, ọsọ agbaze ngwa ngwa, nri akpaaka, ikuku akpaaka, ogo dị elu nke akpaaka, nchekwa na ntụkwasị obi.
1. A na-etinye ihe mkpuchi ọkụ ọkụ na modul refractory fiber modul, nke na-edochi usoro brik refractory mbụ.
2. Na-anabata ngwá ọrụ nchịkwa okpomọkụ nke mbata, njikwa PID, njikwa nkwụsi ike ọkụ ọkụ na ≤ ± 5 ° C;
1. High okpomọkụ alloy waya ma ọ bụ silicon carbon mkpanaka nwere ihe ndị na-adịghị ahụkebe na-eji maka ikpo ọkụ, nke a pụrụ ịdabere na ya, nchekwa, ogologo ndụ ọrụ na mfe iji dochie na ịnọgide na-enwe.
2. Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-ahọrọ ihe ndị dị elu na-ebubata, ntinye ntinye, ndụ ọrụ nke ihe karịrị afọ ise, ọ dịghị aluminum, ọ dịghị ọnwụ ọnwụ, enweghị ígwè proliferation;
XGDR Eletrik kpo oku Rotary Igwe ọkụ okpukpu abụọ
1. Ugboro abụọ crucible imewe, ọkụ nwere ike ịbụ ntuziaka ma ọ bụ eletriki ntụgharị, ọzọ ojiji;
2. A na-agbanye akwa mkpuchi ọkụ site na modul refractory fiber na-ebubata, na-edochi usoro brik mbụ refractory, nke nwere njirimara nke ezigbo nchekwa nchekwa ọkụ, obere nchekwa nchekwa ọkụ na nnukwu ọkụ ọkụ, na ịrị elu okpomọkụ nke mgbidi ọkụ na-erughị 25 °. C;
QGQR Gas Crucible Tilting Furnace
1. Igwe ọkụ ọkụ na-agụnye brik dị elu nke aluminum dị arọ na eriri refractory, nke nwere njirimara nke nchekwa nchekwa dị mma, obere nchekwa okpomọkụ na ngwa ngwa ọkụ ọkụ, na ịrị elu okpomọkụ nke mgbidi ọkụ na-erughị 35 ° C;
LQB gas na-ekpo ọkụ Aluminom na-ejide ọkụ
Igwe ọkụ nnwale a dabara adaba maka nyocha nke magnesium alloys nke ụlọ ọrụ nyocha na mahadum na mahadum na-eji, enwere ike ịhazi ya dịka mkpa dị iche iche na-abụghị ọkọlọtọ.
Mara: Ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike imeziwanye ngwaahịa ndị akọwara na nlele. Nkọwapụta nwere ike ịgbanwe na-enweghị ọkwa. Onyonyo ngwaahịa ndị dị na nlele ahụ bụ naanị maka ntụnye aka yana ngwaahịa ndị ahụ dabere na ngwaahịa n'ezie.
CTM Series aluminum alloy agbaze na ijide ọkụ (igwe-n'akụkụ ọkụ)
CTM Series aluminum alloy agbaze na-ejide ọkụ na-akpọkwa igwe-n'akụkụ ọkụ, nke na-eji ụlọ elu Ọdịdị preheating ihe, obere ike oriri, ngwa ngwa agbaze ọsọ, ziri ezi okpomọkụ akara, elu ogo akpaaka, nchekwa na ntụkwasị obi.
JLQB Gas Aluminom Alloy Concentrating Ọkụ na-agbaze
1. A na-eji ọkụ ọkụ maka nchekwa na nchekwa ọkụ nke mmiri aluminom;
2. Ngwá ọrụ mgbanwe okpomọkụ dị ike (teknụzụ patent), flue gas na-ekpofu ọkụ ọkụ ọzọ, nchekwa ike na nchebe gburugburu ebe obibi;
Ngwa KGAL-1500 Aluminom Liquid Preheating
A na-eji ngwaọrụ Preheating Aluminom na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'oge a na-eme njem, iji hụ na okpomọkụ nke mmiri mmiri aluminom agaghị adaba nke ukwuu, nke dị mma iji tinye ya na mmepụta na ngwa ngwa o kwere mee.
Enwere ike itinye ya na mmiri mmiri aluminom nke nkọwa na ụdị dị iche iche. Ọ bụ ihe enyemaka dị mkpa na mbufe usoro nke etiti agbaze ọkụ.
GCHJ-200 Igwe eji agwọ Ash
Okwu ndị dị mkpa gbasara igwe ihe nkedo Yomato anwụ anwụ
-Award dị ka Top 5 Brand na China;
-Eguzobere na 2008,10+ afọ Ahụmahụ na R&D na nrụpụta;
- PC ụlọ ọrụ:700sets / afọ;
- Ndị otu ọkachamara,Ahụmịhe ọrụ afọ 25+;
-Turn-key project,Otu nkwụsị ọrụ.
GTS-1500 Igwe na-ekpochapụ akpaaka
Preformance dị elu
Ịrụ ọrụ dị elu
Nkwụsi ike dị elu
Nkọwa ngwaahịa: Igwe anaghị agba nchara akpaaka, uru, ọrụ dị mfe, àgwà a pụrụ ịdabere na ya, ọnụahịa ezi uche dị na ya.
Igwe ọkụ na-ebugharị
1. Igwe ọkụ ọkụ na-eji modul refractory fiber modul ebubata, nchekwa nchekwa dị mma, obere nchekwa okpomọkụ, kpo oku ngwa ngwa;
2. Nabata onye na-ahụ maka okpomọkụ ọkachamara na-ebubata, na-eji njikwa PID, njikwa nkwụsi ike zuru oke n'ime 5 ℃;